आओ गठबन्धन गरौँ - परिहास - नेपाल
आओ गठबन्धन गरौँ
अलिक तातो–तातो । अलिक चिसो–चिसो । कचौरा काठमाडौँको ‘वेदर रिपोर्ट’ यस्तै छ । नेपाली राजनीतिको मौसमको हाल पनि उस्तै छ । वामपन्थी गठबन्धनलाई हेर्दा तातो–तातो, लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई छुँदा चिसो–चिसो । तातो–चिसोबीच धु्रवीकरण आफैँमा अस्वाभाविक पनि होइन । अप्राकृतिक पनि हुनु नपर्ने हो । तर, जता जानूस्, गठबन्धनकै चर्चा छ । कान थाप्नु पनि पर्दैन, गठबन्धनको ढोल बजेकै सुनिन्छ । धेरैका लागि आश्चर्य बनेको यो गठबन्धनले अब नयाँ–नयाँ गठबन्धन निर्माणको बाटो खोलेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका मालिक रोहित उर्फ नारायणमान बिजुक्च्छेलाई पनि गठबन्धन नगरी भएको छैन । किनभने, नेमकिपा देशभरिबाट खुम्चिँदै खुम्चिँदै भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्र सीमित भएको यिनले बल्ल पत्तो पाएका छन् । रोहित यी दुवै गठबन्धनका विरोधी हुन् । त्यसैले नयाँ साथीको खोजीमा छन् । उता चन्दा उठाउनकै लागि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले माओवादी नाम दिएर खुद्रा पसल खोलेको पनि धेरै भयो । यस्तै यस्तै नामको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर मोहन वैद्यले अर्को पसल उहिल्यै खोलेका हुन् । तर, दुवै पसल अहिले खासै चलेका छैनन् । पसल त मोहनविक्रम सिंहको पनि चलेको छैन । यस्ता अरु थुप्रै वाम नामधारी पार्टीहरु देशमा होलान्, केपी–प्रचण्डको होलसेल पसलमा नअटाएका । यस्ता वाम पार्टीहरुले ‘झन् महान् वाम गठबन्धन’ नाम दिएर एकीकृत पसल खोल्दा कसो होला ? ग्राहक नपाएपछि विकल्प पनि त छैन नि ! यसैले कमरेडहरु आउनूहोस् र भन्नुहोस्– हे रहलपहल वामपन्थहरु ! आओ हामी पनि गठबन्धन गरौँ ।